Waamicha MM Abiy keessaa hanga ammaatti biqiltuuwwan biiliyoona 1.39 dhaabaman - BBC News Afaan Oromoo
Waamicha MM Abiy keessaa hanga ammaatti biqiltuuwwan biiliyoona 1.39 dhaabaman
Duula Ministirri Mummee Dr Abiyyi Ahimad bara kanatti biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuuf dhiyyeessaniin sochiin biqiltuuwwan dhaabuu bakkeewwan adda addaatti gaggeefamaa tureera.
Haaluma kanaanis, hanga ammaatti biqiltoonni biiliyoona 1.39 dhaabbachuusaa koreen qindeessituu duula dhaabbii biqiltuu beeksise.
Koreen qindeessituu duula dhaabbii biqiltuu miseensota ministiroota shan of keessatti qabate, sochii duula dhaabbii biqilootaa irratti har'a ibsa kenneera.
Yaadni duula dhaabbii biqiloota biiliyoona afurii MM Abiy Ahimadin eegalame caaseeffamni sadarkaa federaalaa hanga gandaatti ijaaramee bifa qindaa'een hojjetamaa akka jiru miseensa koree qindeesituu kan ta'an Obbo Umar Huseen ibsa har'aa irratti himaniiru.
'Qalama qofaan osoo hin taane qawwee hidhannee loluuf qophiidha'
Caasefamni hojii kana hojjechuu dandeessisu akka ijaarame kan himan ministirri qonnaa Obbo Umar koreewwan sadii; koree qindeessituu, koree teknikaa fi koreen miidiyaa ijaaramanii hojjechaa akka jiran himan.
Lammiin tokko biqiltuuwwan 40 akka dhaabu karoorfatame kan jedhan miseensoonni koree qindeesituu duula dhaabbii biqiltuu hanga ammaatti biqiltuuwwan biiliyoona 1.39 dhaabamaniiru jedhan.
Proojektii ji'a Caamsaa eegalame fi ji'oota afurif itti fufu kanaaf biqilootni biiliyoona 4.7 dhaabuuf qophaa'aniiru jedhameera.
Haalli hanga ammaatti mul'ate biqiltuuwwaan biiliyoona 4 dhaabuu akka dandeenyu kan nutti agarsiise dha jechun Obbo Umar himaniiru.
Haaluma kanaanis, Adoolessa 22 Biqiloonni miiliyoona 200 dhaabamuuf karoorfatame riikardii haaraa akka addunyaatti galmeesisuu danda'a jedhan.
Biqilootni dhaabaman kunneen baay'ina lafa bosonaa biyyattiin qabdu guddisuun dabalataan gumaacha biiyyattiin akka addunyaatti qabdu kan guddisu ta'uunsaas himameera.
Biqiloonni erga dhaabamanii boodas kunuunsi akka taasifamuf koree teknikaa ijaarameen hordoffiin ni taasifama jedhameera.
Kana malees marsariitiin qophaa'e iddoo fi gosoota biqilootaa dhaabaman irratti odeeffannoo ni kenna jedhameera.
Hojiin boolla biqiltuu qopheessuus naannolee garaagaraa keessatti hojjetamaa akka jiru fi duula Adoolessa 22 adeemsifamu irratti lammiileen biyyattii magaala fi baadiyyaa jiraatan akkasumas diploomaatonni biyyattii keessa jiran akka hirmaatanis himameera. Muuxannoo bara kanaa ilaaluunis waggoota itti aananitti duulli biqiloota dhaabuu itti fufa jedhameera.
MM Abiy Ahimad: "Qalama qofaan osoo hin taane qawwee hidhannee loluuf qophiidha"